Qi moshi Porto Q 5k wireless obere batrị nyochaa | Akụkọ akụrụngwa
Qi moshi Porto Q 5k wireless obere batrị nyochaa
Jordi Gimenez | | Ngwa, General, Nyocha
Anyị na eji agam n’ihu na-agawanye n’ihu n’obere batrị na moshi kwekọrọ na ogo. N'okwu a, anyị nwere tebụl obere batrị nwere obere chaja na-arụ ọrụ nke na-enye anyị 5.000 mAh iji nwee ike ịkwanye ekwentị anyị n'agbanyeghị ụdị na ebe ọ bụla.
Nke a bụ batrị nwere atụmatụ nwere sistemụ ọgụgụ isi nke nwere ike ịchọpụta ma ọ bụrụ na e nwere ihe mba ọzọ n'etiti ngwaọrụ anyị na batrị n'onwe ya. Mba, anyị anaghị ekwu maka mkpuchi ma ọ bụ ngwa anyị nwere ike iji na ngwaọrụ ebe ọ bụ na batrị a nwere ike ịkwanye ngwaọrụ ọ bụla nwere ihe mkpuchi ya ruo 5mm, anyị na-ekwu maka usoro nchọpụta maka ọla ma ọ bụ ihe ndị yiri ya n'etiti ngwaọrụ anyị na isi. Nke a bụ ezigbo usoro nchekwa nke ahụ anyị na-ekwe nkwa nchekwa n'ọnọdụ ọ bụla ibu.
1 Ihe eji emeputa ihe
2 Ihe anyị hụrụ n’ime igbe
3 General nkọwa nke moshi Porto Q 5k
N'okwu a, akụkụ nke metụrụ okpokoro ma ọ bụ ebe anyị chọrọ iji isi na-akwụ ụgwọ nwere mgbanaka silicone na-egbochi ya ịpụ, n'elu anyị na-ahụ otu mgbanaka a iji kewaa ngwaọrụ site na isi ya na nke ahụ osisi a n’agaghị amị amị. Igwe batrị a bụ nke plastik na akụkụ elu anyị na-ahụ akwa isi awọ nke na-enye dum ihe dị mma.
Anyị nwere ike ịsị na ihe eji arụ ọrụ maka imepụta batrị a obere nke na-ejekwa ozi dị ka chaja tebụl ma ọ bụ ndị yiri ya, bụ n'ezie magburu onwe. Ọ na-agbakwụnye na nchọpụta nke ihe ndị mba ọzọ n'etiti batrị na ngwaọrụ nke na-eme ka ọ dị nchebe n'ezie.
Ihe anyị hụrụ n’ime igbe
N'ime igbe a nke moshi Porto Q 5k anyị ga-ahụ akwụkwọ ntuziaka na-arụ ọrụ nke batrị n'onwe ya yana akwụkwọ ikike ngwaahịa, na mgbakwunye na batrị n'onwe anyị hụrụ a USB C na USB A USB nke ihe dị ka 50cm n'ogologo nke ahụ na-enye anyị ohere ịgba batrị n'onwe ya ma ọ bụ ọbụlagodi ngwaọrụ ndị na-eji otu ọdụ ụgbọ mmiri a.
General nkọwa nke moshi Porto Q 5k
The Porto Q 5K nwere a 5.000 mAh ikikenke anyị ga-enwe ike ịkwụnye ngwaọrụ anyị ihe karịrị ugboro 2 n'otu ụgwọ nke batrị n'onwe ya. Ya mere na-a wireless Nchaji isi n'ebe ọ bụla ọ bụ zuru okè.
Anyị nwere ike iji USB A ọdụ ụgbọ mmiri nke batrị onwe ya gbaa ekwentị ama na-enweghị teknụzụ Qima ọ bụ kwụọ ngwaọrụ enyi gị n'otu oge ka iPhone anyị na-akwụ ụgwọ. Batrị ọhụrụ Porto Q 5K nwere batrị Qi ma kwekọọ na ụdị ngwaọrụ niile na-akwado ụgwọ a. O nwekwara ọkụ nwere ọgụgụ isi nke na-agwa anyị mgbe ekwentị anyị na-akwụ ụgwọ na ebe ya zuru oke ka ọ ghara inye anyị nsogbu, ọ dịkwa ike.
Ihe kachasị mma banyere obere chaja a na-ebugharị ebugharị bụ na ọ na-enye anyị ohere nhọrọ nke iji ya dị ka ntọala na-akwụ ụgwọ maka ụlọ, yabụ mgbe ejikọtara ya na ihe nkwụnye ọkụ na mgbidi ahụ, ọ na-arụ ọrụ dịka akwa matkwụ ụgwọ ikuku na-enweghị eriri, yana mgbakwunye uru nke ike Ghaji batrị gị obere oge n'otu oge maka mgbe anyị chọrọ ya n'ụlọ ma ọ bụ n'ọfịs.
Nke a bụ batrị dị na mpụga nke nwere ikike ịbụ isi jikọrọ n'ụlọ, ọrụ ma ọ bụ ebe ọ bụla anyị chọrọ ịkwụ ụgwọ ekwentị anyị. Enwere batrị dị na mpụga na ahịa ndị "dị" na nke a site na moshi n'ihe gbasara ọrụ, mana n'eziokwu ogo ihe eji emeputa ihe na ihe ndi ozo nke batrị a na-eme ka ọ bụrụ ezigbo nhọrọ. N'aka nke ọzọ, anyị ga-ekwu na ọnụahịa ahụ nwere ike ịdị oke elu karịa ịbụ "Qi batrị amaara ama" mana ogo ngwaahịa a n'ozuzu ya bụ ihe na - eme ka ọ dị elu.
Porto Porto Akara 5k
Ibu ibu ikike n'ebe ọ bụla
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ngwa » Qi moshi Porto Q 5k wireless obere batrị nyochaa